ISKCON ၏စိတ်နှလုံးကိုဖော်ထုတ်ခြင်း - ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်း
ဂါ, စကျတငျဘာ 20, 2016 / ထုတ်ဝေသည် Inspiration
ငါသည်ဤဆောင်းပါးကိုငါ့စာအုပ်ဖြည့်စွက်အဖြစ်မှတ်, īrīlaPrabhupāda - ISKCON မှတည်ထောင်သူအာကာရာ. အထူးသဖြင့်မာရာပူရှိŚrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhākura၏မိဘကျောင်း၏philosophrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhākura၏မိဘကျောင်း၏အတွေးအခေါ်နှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအရေးပါမှုအရ Vedic Planetarium ၏ဗိမာန်တော်၏အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများတွင်ကျယ်ပြန့်သည်။
ငါရေးသည်နှင့်အညီ, Vedic Planetarium ၏ခမ်းနားထည်ဝါသောဘုရားကျောင်း, ယခု350rīdhāmaMāyāpur၏ alluvial မြေဆီလွှာအထက်ပေ ၃၅၀ မြင့်မားသော၎င်း၏အမိုးခုံးသည်၎င်း၏ပုံစံကိုအတွင်းနှင့်အပြင်ကိုဆက်လက်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဤဗိမာန်တော်သည်ပြီးပြည့်စုံသည့်အခါ၎င်းသည်တည်ထောင်သူမစ်ရှင်၏တာ ၀ န်ကိုပြည့်စုံစေရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်သော Krishna ဟိန္ဒူသိစိတ်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုနားလည်လိမ့်မည်။အာကာရာ: Lord Caitanya's တည်ဆောက်ရန် saṅkīrtana ကျွန်ုပ်တို့ခေတ်၏ဝိညာဉ်ရေး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်များမြင့်တက်လာခြင်းမှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကယ်နုတ်ရန်ထိရောက်သောရေယာဉ်အဖြစ်လှုပ်ရှားမှု။
ဤကတိက ၀ တ်အားဖြင့်īrīlaPrabhupādaသည် Guru Mahārāja၏ပြတ်တောက်သောမစ်ရှင်ကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေခဲ့ပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အဆောက်အအုံများအားလုံးနှင့်အတူထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ငါတို့မှတစ်ဆင့်ŚrīlaPrabhupādaသည်သူ၏အလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်သည်။ Māyāpurမှာပုံသဏ္takingာန်ယူပြီးဗိမာနျတျောထိုအလုပ်၏အဓိကဖြစ်ပါတယ်။
Māyāpurမှာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံးအတွက် ၀ ိညာဉ်ရေးရာဗဟိုချက်ကိုတည်ထောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကīrīlaPrabhupādaကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာ ၁၉၇၂ ခုနှစ်မှာသူက Gaura-pṇrcelebrimāကိုဒီဗိမာန်တော်ကိုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအားဖြင့်အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့်အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ပြီးခဲ့သည့်နေ့ကသူသည်သူ၏လန်ဒန်တပည့် Caturbhuja dāsaထံစာရေးခဲ့သည်။
အခုငါတို့ Krsna အတွေးအခေါ်ကိုအလေးအနက်လေ့လာနေတာကိုကျေနပ်မိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒီများနှင့်မသမာသူများ၏မည်သည့်စိန်ခေါ်မှုကိုမဆိုသင်အောင်မြင်နိူင်အောင်သင်ဤအတိုင်းဆက်လုပ်ရန်လိုလားသည်။ သို့မှသာသင်၏ဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းသည်အစွမ်းထက်လိမ့်မည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသင်၏ဘုရားသခင် - ညီအစ်ကိုများနှင့်လည်းကောင်း၊ လန်ဒန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင်လည်းကောင်းအတူတကွ ပူးပေါင်း၍ သင်ဤမျှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဟောပြောကြလိမ့်မည်၊ တစ်နေ့တွင်ဤ Krsna ဝိညာဏ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကမ္ဘာကိုအန္တရာယ်အရှိဆုံးအခြေအနေမှပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Lord Caitanya Mahaprabhu ၏ဆန္ဒဖြစ်ပြီးနက်ဖြန်နေ့တွင် Mayapur ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာ့ဌာနချုပ်အတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ချခြင်းအားဖြင့်သခင်ဘုရား၏အသွင်အပြင်နေ့ကိုကျင်းပကြလိမ့်မည်။
1972rīlaPrabhupādaသည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သည့်အတိုင်းမိမိကိုယ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက်ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Vedic Planetarium, လက်ရှိpresentrīMāyāpur Candrodaya Mandīra၏အန္တိမနေရာဖြစ်သောဘုရားကျောင်းကိုပြီးမြောက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ဘယ်အချိန်မှာရွှေ မြဝတီ- သခင်ဘုရား၏တန်ခိုးတော်ကိုထင်ရှားပြခြင်းသည်အခမ်းအနားကျင်းပခြင်းနှင့်အရောင်တောက်ပခြင်းအပေါ်၌တည်လိမ့်မည် kalaśa ဗိမာန်တော်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်သောအခါ၊ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးသည်အလွန်ထင်ရှားသည် မြဝတီကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ISKCON ၏အချက်အချာနှင့်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သောမယာယာပူ၏နေထွက်ရာမွန်း၏ကရုဏာတော်ကိုအောင်နိုင်သူ၊ အခြားဝေးလံသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်စင်တာများနှင့် Krishna ဟိန္ဒူသိစိတ်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏စုရုံးနေရာများကိုဤဗဟိုဗိမာန်တော်၏အစုအဝေးအဖြစ်အတူတကွချိတ်ဆက်ထားသည် aṁśas နှင့် Kalāsအစိတ်အပိုင်းများ၊ အကိုင်းအခက်များနှင့်ခြေလက်များကဲ့သို့ - ချဲ့ထွင်မှုများနှင့်ခွဲချဲ့ထွင်မှုများ - တွင်ပါ ၀ င်သည်။
ဤဗိမာန်တော်ကိုဆောက်လုပ်ရန် ISKCON ကိုယ်တိုင်သည်စည်းလုံးမှုတစ်ခုလုံးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပြီး Lord Caitanya ၏သင်ကြားမှု၏ဗဟိုချက်တွင်မတူကွဲပြားမှုပေါင်းစည်းညီညွတ်မှုကိုပြသလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုတည်ထောင်သူ၏စမ်းသပ်မှုအဖြစ်ယူမှတ်နိုင်သည်။အာကာရာ:“ ငါ့ကိုချစ်တဲ့ခင်ဗျားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါပြသပြီးတဲ့နောက်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုအတူတကွထိန်းသိမ်းဖို့ဘယ်လောက်အထိပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာကိုပြသလိမ့်မယ်” ဟုŚrīlaPrabhupādaကသူ၏နောက်ဆုံးလများတွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒီစာမေးပွဲကိုအောင်နိုင်ဖို့ငါတို့ဘုရားကျောင်းကိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ် ဘယ်မှာလဲ ကသည်နှင့်အဘို့ ဘာလဲ ဟုတ်တယ်။ aspectsrīlaPrabhupādaမစ်ရှင်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်လုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ပတ်သတ်၍ ဤရှုထောင့်တစ်ခုစီသည်နက်ရှိုင်းသော ၀ ိညာဉ်ရေးရာအရေးပါမှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ဤတွင်နေရာချထားသောသုံးဖက်မြင်အဆောက်အအုံအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနိုင်သည် မာလာ ဒါမှမဟုတ် yantraမော်ဒယ်လ်နှင့်အဆုံးစွန်အဖြစ်မှန်၏သင်္ကေတအဖြစ်၎င်းကိုအသေးအဖွဲမဟုတ်စေရန်ဂရုစိုက်ခြင်းဖြစ်သည် မာလာ "ရိုးရိုး" သင်္ကေတအဖြစ် - အကြွင်းမဲ့အမှန်တရားကိုကိုင်တွယ်သောအခါ၊ သင်္ကေတနှင့်ပုံဆောင်သည်မတူပါ။ အရည်အချင်းပြည့်မီသူများသည်သခင်နှင့်သူ၏မြင့်မြတ်သောအမည်များသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများအတူတူဖြစ်သည်ကိုတိုက်ရိုက်သိမြင်နိုင်သည် ထိုဘုရားကျောင်းသည်အလားတူအစွမ်းထက်။ ဝိညာဉ်ရေးရာပါ ၀ င်မှုရှိသည်။ :rīMāyāpur Candrodaya Mandīraသည်စကြဝuniversalာကိုမောင်းနှင်နေသောဝိညာဏဒိုင်နိုဆော၏ထင်ရှားသောပုံစံနှင့်အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သည် saṅkīrtana သခင်ဘုရားသည် Caitanya ၏လှုပ်ရှားမှု။
သခင်ယေရှု Caitanya ၏ပထမဆုံးကြီးမြတ်သောအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုရေးသားသူŚrīlaVṛndāvanadāsaāhākuraသည်အနာဂတ်တွင်သူအားအနာဂတ်ရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည် -“ သခင်ဘုရားNityānanda၏ကရုဏာတော်ဖြင့်” Crī Caitanya-bhāgavata“ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးသည် Lord Caitanya ၏ဘုန်းတော်ကိုယခုသီဆိုနေသည်။ ”
ရာစုနှစ်သုံးခုခန့်အကြာတွင်īrīlaPrabhupādaသည်မဟာယာနရှိတပည့်တော်များရှေ့တွင်ထိုင်လျက်၊ အကြီးသုံးဆယ့်ထပ်ဘုရားကျောင်းကိုဆောက်လုပ်ရန်နှင့်၎င်းတွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှစ်ခုလုံးကိုပြသထားသည်။
တိုတိုပြောရရင်, အဲဒီမှာသမျှသော: Kŗșṇa နဲ့ Kŗșṇa ရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းအင်။
ŚrīlaPrabhupādaက“ ဒီဗိမ္မာန်တော်ကိုငါနာမည်ပေးခဲ့တယ်ŚrīMāyāpur Candrodaya Mandīra, Maāāpurရဲ့ထွက်လာတဲ့မွန်း။ တပည့်တော်များအား“ လပြည့်သည်တိုင်အောင်မထနိုင်အောင်များပြားစေကြလော့။ ပြီးတော့ဒီလကမ္ဘာတစ်ခွင်ပျံ့နှံ့သွားမယ်။ အိန္ဒိယတစ်ခွင်လုံးကိုသူတို့လာကြည့်ကြမယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှလာကြလိမ့်မည်။ ”
နှစ်နှစ်အကြာတွင်Māyāpurတွင်īrīlaPrabhupādaသည်ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်အတွက်သူ့နာမည်ကိုမှုတ်သွင်းသောစာသားကိုထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ Lord Caitanya ၏ပထမဆုံးအခန်းငယ်တွင်တွေ့ရသည်။ Śikṣāṣṭaka: śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇam။ ဤနေရာတွင်Mahāprabhu၏လှပသောဥပစာစကားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားသည် saṅkīrtana လ၏ရောင်ခြည်များသို့candrikā) ညမှောင်သောနှင်းပွင့်များ၏အမွှေးပွင့်များကိုဖွင့်ပေးသော (ကရီရာ) အကောင်းဆုံးအရာasreyasသခင်ဘုရားနှင့်ထာဝရဆက်ဆံရေးဖြစ်သည်။
“ ဘဝရဲ့အမြင့်ဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကိုလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ထားပါတယ်” ဟုīrīlaPrabhupādaကပြောကြားခဲ့သည် īrīmad-Bhāgavatam အတန်းအစား။ ဒါကြောင့် Kŗșṇa ဝိညာဏ်ကိုဖြန့်ဖြူးခြင်းဆိုတာလရောင်ကိုပျံ့နှံ့စေခြင်းဖြစ်တယ်။ ထို့ကြောင့်ဤဗိမာန်တော်ကိုŚrīMāyāpur-candrodaya ဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ မြင့်တက် (ayaရာဝတီလပုဂံ) ၏ŚrīMāyāpur: īrīlaPrabhupādaမှပေးသောနာမတော်သည်ဤဗိမာန်တော်၏လွှမ်းမိုးမှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ပျံ့နှံ့သွားလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်“ Caitanya-candra” နှင့်“ Māyāpur-candra” တို့သည် Lord Caitanya ၏အမည်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်“ īrīMāyāpur-candrodaya” သည်ဗိမာန်တော်နှင့်ဗိမာန်တော်၏ဗဟိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင်Pañca-tattva အနေဖြင့်ဥက္ကpres္ဌဖြစ်သူŚrī Caitanya ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းရည်ညွှန်းသည်။ ဤအရာများနှင့်အခြားအရာများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဗိမာန်တော်သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြည့်အားဖြည့်ခြင်းနှင့်ခွန်အားပြည့်ဝသောစင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Caitanya ၏ကောင်းချီးများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ပျံ့နှံ့သွားသည်။
ထို့ကြောင့်“ ငါတို့လှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာပဲ” ဟုīrīlaPrabhupādaကသူ၏အတွင်းရေးမှူးဗြဟ္မန္ဒာဆွာမီအား“ မာရာပူဘုရားကျောင်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်သည်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ISKCON နှင့် PREDECESSORS VEDIC PLANETARIUM ၏နမူနာများ
īrīlaPrabhupādaသည်မိမိ၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာသခင်ဖြစ်သောīrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīashākura၏လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သင်ကြားခြင်းများမှသည်၎င်း၏စိတ်နှလုံးအတွင်းရှိအနည်းကိန်းဝတ်ပြုရာအိမ်တော်အပါအ ၀ င်သူ၏လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုလုံး၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်လမ်းညွှန်မှုကိုရရှိခဲ့သည်။
īrīlaSarasvatīāhākura၏အောင်မြင်မှုများကိုအတိုချုပ်ကြည့်ရှုခြင်းကသူ၏တစ်ကိုယ်ရေကျွန်ဖြစ်သော သာဓက နတ်သမီး သူသည် Lord Caitanya ၏သင်ကြားမှုကိုတည်ထောင်ရန်သူ၏ဝိညာဏသခင်၏စီမံချက်ကိုအပြီးသတ်ခဲ့သည် (gaura-vāṇī-pracāriṇa) အနောက်နိုင်ငံများအတွက်pāścātya-deśa), ဒီတော့ nihilism နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမတူကွဲပြား၏မျိုးကွဲများကလွှမ်းမိုး (nirviśeṣa-śūnyavādi).
၁၉၁၈ ခုနှစ်တွင်မာရီယာတွင်isrī Caitanya Maṭhaကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးŚrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhkkuraသည်သူ၏ဟောပြောခြင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော“ GauḍīyaMaṭha” သို့မဟုတ်“ Gauḍīya Mission” ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ လာမည့်ဆယ်စုနှစ်နှင့်တစ်ဝက်ကျော်ကာလအတွင်းသာသနာ့အဆောက်အအုံများဖြစ်သောမာ့ခ်ျ ၆၀ ကျော်ပါ ၀ င်ခဲ့သည် ဆရာမ နှင့် ဗြဟ္မာ.
သို့သော်ဤအထင်ကြီးဖွယ်အောင်မြင်မှုသည်အနောက်၌ Lord Caitanya ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထူထောင်ရန်သူ၏ ပို၍ ရဲရင့်သောစီမံကိန်း၏အခြေခံဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု-၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင်īrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīṬhākuraသည်-rīla Bhaktivinoda majorhākura၏အဓိကတရားဟောအင်္ဂါများဖြစ်သောဘင်္ဂါလီဘာသာစကားကိုအသွင်ပြောင်းသောအခါအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟောပြောခြင်းကိုထင်ပေါ်ကျော်ကြားစေသည်။ Sajjana-toṣaṇī, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဂျာနယ်သို့ သဟဇာတ။ သူ၏ဆိုလိုရင်းကိုအလေးပေးပြောကြားပြီးīrīlaSarasvatīāhākuraသည်အယ်ဒီတာ၏ရာထူးနှင့်ခေါင်းစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက်သုံးနှစ်အကြာတွင်သူသည်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဟောပြောခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်သူ၏မစ်ရှင်ဌာနချုပ်အဖြစ်အမှုဆောင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့်ကတ္တားကတ်ဘာဂဇားတွင်တစ်မူထူးခြား။ ခမ်းနားထည်ဝါသောဗိမာန်တော်ဖွင့်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည်။
ကတ္တားက“ ကမ္ဘာ့မြို့တော်” ဖြစ်တယ်။ ၎င်းသည်အရှေ့ဘက်တွင်ဗြိတိသျှဘုရင်၏seatကရာဇ်နေရာအဖြစ် ၁၉၁၁ အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်ထိုနေရာကိုဒေလီသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်၊ သို့သော်ကတ္တားသည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ ဘဏ္financeာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှု၏တက်ကြွသောဗဟိုချက်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤမြို့သည်ကမ္ဘာချီမစ်ရှင်၏ဌာနချုပ်အတွက်သင့်လျော်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင်အီရီလာBhaktisiddhāntaSarasvatīāhākuraသည်ရွေးချယ်ထားသောတပည့်သုံး ဦး အားလန်ဒန်မြို့သို့ သွားရောက်၍ ဘုရားကျောင်းကိုတည်ဆောက်ရန်လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။
īrīlaSarasvatīāhākura၏ကြီးမားသောရည်မှန်းချက်ကြီးမစ်ရှင်၏အစ မှစ၍ ဆိတ်ကွယ်ရာMāyāpurစင်တာ၏ထူးခြားသောရပ်တည်ချက်ကိုအမြဲအသိအမှတ်ပြုဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ လှုပ်ရှားမှု၏ထုတ်ဝေသောစင်တာများစာရင်းတွင်Śrī Caitanya Maṭhaသည်ပထမဆုံးရောက်လာပြီး“ မိဘသင်္ချာ” ၏ထူးခြားသောသတ်မှတ်ချက်ကိုရတတ်သည်။ သို့ရာတွင် ၁၉၃၀ တွင်“ Sri Gaudiya Matha” ဟုအမည်ပေးထားသောတောက်ပသော Calcutta ဘုရားကျောင်းသစ်သည်၎င်း၏ထင်ရှားသောတည်နေရာ၊ ၎င်း၏ဖြူစင်သောစကျင်ကျောက်၊ မျက်နှာစာ၊ ခမ်းနားထည်ဝါသောချိန်းဆိုမှုများနှင့်ရဲရင့်သောရည်ရွယ်ချက်တို့ကြောင့်အခြားစင်များအားလုံးကိုအထူးသဖြင့် အထွတ်အမြတ်ထားရာ“ မိဘဘုရားကျောင်း” ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်သောပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု၊ လှုပ်ရှားမှု၏မူဘောင်တွင်အက်ကွဲကြောင်းတစ်ခုငါတို့သိသည်နှင့်အညီအစေ့များရှိသည်။ ၏အယ်ဒီတာ သဟဇာတ ကြောင်းသဘောထားကိုတန်ပြန်ချင်တယ်။ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်၏ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသည်မြို့ကြီးရှိသိသာထင်ရှားသည့်အချက်အချာကျသောမြို့သစ်နှင့်၎င်း၏“ မိဘဘုရားကျောင်း” ကြားရှိဝေးလံခေါင်သီသောဘင်္ဂါလီကျေးလက်ဒေသတွင်ဝှက်ထားသော“ မိဘဘုရားကျောင်း” ၏ကြွယ်ဝပြည့်စုံသောအသေးစိတ်ရှင်းပြချက်ကိုထုတ်ဝေခွင့်ရခဲ့သည်။
ဤသည်ရှည်လျားသောအက်ဆေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး၏ဝိညာဏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်၏လေးနက်ဖော်ထုတ်ဖြစ်ထွက်လှည့်။ ဆောင်းပါး“ Sri Gaudiya Math” ဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆောင်းပါးသုံးခုကိုရေးသားခဲ့သည် သဟဇာတလှုပ်ရှားမှုကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသည်။ ŚrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhākura၏တိုက်ရိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤအပိုင်းသုံးပိုင်းအက်ဆေးသည်ဝိညာဉ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၏ဘာသာရေးပုံစံဖြစ်သောဒေသနာ - ၎င်းကိုīrīlaSarasvatīāhākuraကိုလမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်၎င်းအနေဖြင့်သူ၏အခိုင်မာဆုံးနှင့်သစ္စာရှိသူကျောင်းသားŚrila Bhaktivedanta Swami Prabhupādaကိုပါလမ်းညွှန်ပေးသည်။
ဆောင်းပါး၏ချက်ချင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်နက်ရှိုင်းသော ၀ ိညာဉ်ရေးအကြောင်းရင်းများကိုရှင်းလင်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်သောအသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သောBāg-bazar ဘုရားကျောင်း -“ ခေတ်သစ်မြို့ပြပတ်ဝန်းကျင်တွင်” ဟူသောဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း - Mayāpurရှိīrī Caitanya Maṭha၏လက်အောက်တွင်သာမက၊ ဒါပေမယ့်လည်းသူ့ဟာသူတစ်ခုက "တိုးချဲ့" ဖြစ်ပါသည်:
Gaudiya Math (ကတ္တားကတ်) သည် Sridham Mayapur ၏ Sri Chaitanya Math ၏နိယာမဌာနခွဲဖြစ်သည်။ Gaudiya Math နှင့် Sri Chaitanya Math အကြားခြားနားချက်သည်မီးခွက်တစ်ခုမှမီးခွက်နှင့်တူညီသည်။ Gaudiya သင်္ချာသည် Chaitanya သင်္ချာကိုမြင်နိုင်သောပုံစံဖြင့်ကမ္ဘာ၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြစ်သည်။ Sri Chaitanya Math သည်မူလရင်းမြစ်အဖြစ်ထာဝရတည်ရှိပြီး၎င်းသည်ဤကမ္ဘာ၏လူများ၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ပင်ထာဝရဘုရား၏ထာဝရနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်။ Gaudiya သင်္ချာနှင့်အခြားအစ်မဌာနခွဲသင်္ချာ၏လုပ်ဆောင်မှုများသည်သီရိချက်တာယာသင်္ချာနှင့်ဆင်တူသည်။ ဤလောက၏သာမန်လုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လုံးဝကွဲပြားသည်။
ဤနေရာတွင်ŚrīlaPrabhupādaသည် ISKCON ၏ကိုယ်ပိုင် ၀ ိညာဉ်ရေးရာပုံစံကိုတည်ကြည်စွာပုံစံပြုထားသောပုံစံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။ နက်နဲသော -“ esoteric” - အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောနိုင်သည် - ထာဝရအဓိပ္ပာယ်ရှိသည် - īrīdhāmaMāyāpurတွင်ထူးခြား။ ထင်ရှားသော“ မိဘ” ဘုရားကျောင်းတည်ရှိသည်။ မူလအရင်းအမြစ်အဖြစ်တည်ရှိသော“ ဤလောကရှိလူတို့၏ရှုမြင်ပုံကိုလည်းထင်ရှားစွာဖော်ပြသည်။ ” သတိပြုရန်မှာ“ မူလအရင်းအမြစ်” သည်ဘင်္ဂလားကျေးလက်ဒေသရှိမကြာသေးမီကဆောက်လုပ်ခဲ့သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းအစားGauḍīya Ma ofha ၏“ မူလရင်းမြစ်” သည်“ ထာဝရတည်ရှိခြင်း၏ထာဝရတည်ရှိမှု၏ဝိညာဏနယ်ပယ်” ဖြစ်သောဝိညာဏဘုံ၌“ ထာဝရတည်ရှိသည်” ဖြစ်သည်။ သို့သော်ထိုဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောဝတ်ပြုရာအိမ်တော်ကို“ ဤလောကရှိလူတို့မြင်သကဲ့သို့ထင်ရှားစွာ” ထင်ရှားစွာပြုလုပ်ထားသည်။
CrīdhāmaMāyāpurသည် Lord Caitanya ၏ပုံပန်းသဏ္ာန်နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည်တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကျော်လွန်၍ တည်သည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ဆင်းသက်သည့်အခါတိုင်း၊ သူ၏ထာဝရနေရာနှင့်အပေါင်းအဖော်အားလုံးသည်သူနှင့်အတူဆင်းသက်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ထို့ကြောင့် Lord Kṛṣṇa၏ထာ ၀ ရဘုံသည်ထူးကဲသည် vṛndāvana-līlāGoloka Vṛndāvanaဟုခေါ်တွင်သည် Gokula Vṛndāvanaအဖြစ်မြေကြီးပေါ်မှထင်ရှားပေါ်လွင်သည်။ အလားတူပင် Caitanya ၏ထာဝရဘုံ līlā Kṛṣṇalokaတွင်Śvetadvīpaဟုလူသိများသည်ဘင်္ဂလားတွင်ထင်ရှားသောNavadvīpaနှင့်၎င်း၏enclrīdhāmaMāyāpurအဖြစ်ထင်ရှားသည်။ ဤနှင့်အခြားကမ္ဘာပေါ်ရှိအခြားမြင့်မြတ်သောနေရာများတွင်ရုပ်ဝတ္ထုနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာလောကများသည်တနည်းအားဖြင့်တဆက်တည်းဖြစ်သောကြောင့်ကူးဖြတ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဘုရားဖူးခရီးစဉ်များအတွက်အမည်ဖြစ်သည် tīrtha, ဒါမှမဟုတ် Ford ။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည့်အရာသည်၎င်းနှင့်အခြားအရာများကိုတည်ထောင်သူမှထုတ်ဖော်ပြသခြင်း၊အာကာရာ မှာကျောင်းဆောင်ဖြစ်သော“ မိဘဗိမာန်တော်” တွင် tīrtha တစ် ဦး ပေါ်တယ်, ဒါမှမဟုတ်တံခါးပေါက်, ဒါမှမဟုတ်တံတားအဖြစ်မြင်နိုင်သောတံခါးဝအဖြစ်။
ဤဗဟိုဗိမာန်တော်သည်ကိုးကွယ်သူများ၏သနားခြင်းကရုဏာအားဖြင့်၎င်းင်း၏ပင်ရင်းသန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်မှညစ်ညမ်းသောဒေသများသို့ဖြန့်ကျက်သွားသောအခါသူတို့၏အရင်းအမြစ်နှင့်ဝေးကွာနေသော်လည်းဤကျယ်ပြန့်ခြင်းသို့မဟုတ်အကိုင်းအခက်များသည်၎င်းနှင့်အတူမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုသော“ မီးခွက်တလုံးသည်မီးခွက်တစ်လုံး” ၏နှိုင်းယှဉ်ချက်ဖြစ်သည် သဟဇာတ, ထံမှယူသည် ဗြဟ္မာ - saṁhitā (5.46သခင်ယေရှုသည်သူ၏ရာထူးများဖြစ်သောBalarāma, Mahā-viṣṇuစသည်ဖြင့်ရှင်းလင်းဖော်ပြရန်အသုံးပြုသောနေရာဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်ဥပစာစကားအားအသုံးပြုခြင်းကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအားလုံးသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအဖွဲ့အစည်း၏အစိတ်အပိုင်းများအနေဖြင့်၊ မူလတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းအခြားတစ်ခုမှာမူ၎င်း၏အကိုင်းအခက်များ၊
မူရင်းရင်းမြစ်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို၎င်း၏အကိုင်းအခက်များနှင့်ဌာနခွဲများဖြင့်ထူထောင်ခဲ့ပြီးတည်ထောင်သူအားစည်းလုံးစေသောဝိညာဏဝိသေသလက္ခဏာကိုဆက်လက်ဖော်ပြသည်။အာကာရာ အဖွဲ့ ၀ င်အသီးသီးနှင့်ဌာနခွဲများ၊ အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အတူ -
Gaudiya Math သည်တည်ထောင်သူ Acharyya (sic) နှင့်လည်းတူညီသည်။ သူ၏အပေါင်းအသင်းများ၊ နောက်လိုက်များနှင့်သူ၏မြင့်မြတ်သောကျေးဇူးတော်ဘ ၀ သည်သူကိုယ်တိုင်၏ခြေလက်များဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲကဘယ်သူမှဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ၏အပြည့်အဝလက်အောက်ခံခြေလက်ပေမယ့်ဘာမှမလုပ်ဟုဆိုသည်။ ဦး ခေါင်းကိုခြွင်းချက်မရှိ၊ အကြောင်းမဲ့၊ အလိုအလျောက်လက်အောက်ခံမှုကိုလက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းများ၏အပြည့်အ ၀ လွတ်လပ်စွာအစပြုလုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်သဟဇာတဖြစ်ရုံသာမကလုံးဝလိုအပ်သည်ဟုတွေ့ရှိရသည်။
စံထားညီညွတ်မှုနှင့်စည်းလုံးညီညွှတ်မှုနှင့်အတူဆောင်ရွက်နေသောအကျိုးပြုသောဝိညာဉ်ရေးအဖွဲ့အစည်းသည်တည်ထောင်သူနှင့်မတူပါအာကာရာ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်formrīKṛṣṇa Caitanya သို့arīKṛṣṇa Caitanya သို့lovingဂုတ်လ၊ ဤအချက်ကိုထပ်မံရှင်းလင်းပြောကြားသည် -
Gaudiya Math ၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည်သူ၏မြင့်မြတ်သောကျေးဇူးတော် Paramahansa Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj၊ သီရိ Caitanyadeva မှအသက်ဝိညာဉ်၏အကျိုးအတွက်မူလကခွင့်ပြုခဲ့သည့်ဝိညာဉ်ရေးရာဆက်ခံသူဖြစ်သောဝိညာဉ်ရေးဆက်ခံသူမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Gaudiya Math ၏လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံး၏လက်တွေ့ဘဝသည် Acharya ၏အစပျိုးမှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ Sridham Mayapur မှ Sri Chaitanya Math သည် Gaudiya Math ၏ရင်းမြစ်ကိုဖော်ပြသည်။ Acharya သည်မြင့်မြတ်သောသခင်သီရိ Krishna Chaitanya နှင့်အတူထာဝရနေထိုင်သည်။ သူ၏ Transcendental နေထိုင်မှုသည် White Island ကျွန်းရှိ Sridham Mayapur တွင်တည်ရှိသည်။ ထိုအရပ်မှ Acharya သည်လှည့်စားစွမ်းအင်၏ချုပ်ကိုင်ထားရာမှစိတ်ဝိညာဉ်ကိုရွေးနုတ်ခြင်းနှင့်သူတို့ကိုသီရိသီရိ Radha-Govinda ၏ခြေမှသူတို့ကိုမေတ္တာရှင်ဆည်းကပ်အပ်နှင်းခြင်းအဘို့အသာမန်လေယာဉ်ပေါ်တွင်သူ၏အသွင်အပြင်ထင်ရှား။ သီရိ Chaitanya သင်္ချာ၏အစွန်အဖျားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိစိတ်ဝိညာဉ်၏အကျိုးအတွက်အဘို့ကျေးဇူးတော်၏ bestowal ၏ဗဟိုတစ်ခု extension ကိုဖြစ်ကြသည်။ Sridham Mayapur နှင့်ဆက်သွယ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းသည်စစ်မှန်သော Gaudiya Math နှင့် Acharya တို့၏ကျေးဇူးတော်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဤစာပိုဒ်သည်သတိပေးစာဖတ်ခြင်းနှင့်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းတို့ကိုပြန်လည်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ŚrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhākura၏အဖွဲ့အစည်း၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်လုပ်ဆောင်ပုံကိုထိုးဖောက်ဖော်ပြသည်။ ၎င်းကို ၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတည်ထောင်သူ - ၀ ိညာဉ်ရေးရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများဖွဲ့စည်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။အာကာရာ, ၏ဗဟိုဗိမာနျတျော အာကာရာ၎င်း၏ထုတ်ပေးထားသော extension များ - ISKCON အတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်၊ အနှစ် ၃၅ နှစ်အကြာတွင်īrīlaSiddhāntaSarasvatī၏အပြည့်အဝဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်းဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည် သာဓက မိမိ၏နက်ရှိုင်းစွာနှင့်သစ္စာရှိစွာနားလည်မှုကို အခြေခံ၍ ISKCON ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သောတပည့် ဂုရု's works ။
ထိုအယူအဆအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့,rīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhākura၏īrī Caitanya Maṭhaအား,rīlaPrabhupāda၏ဝေဒ Planetarium ၏Mayāpurရှိရှေ့ပြေးပုံစံအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည်။ movementrīlaPrabhupāda၏ဤနေရာ၌သူ၏လှုပ်ရှားမှု၏ဗဟိုဘုရားကျောင်းနှင့်ကမ္ဘာ့ဌာနချုပ်ထားရှိခြင်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားသည်။
ယုံကြည်ခြင်းတရားတစ်ခုတည်းကိုလက်ခံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်အလွန်နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။ နှစ်စဉ် Gaura-pūrṇimāပွဲတော်များအတွက်ပထမဆုံးသောMayāpurသို့ခရီးသွားသူအများစုသည်Prabhupādaသည်ကျွန်ုပ်တို့၏“ ကမ္ဘာ့ဌာနချုပ်” ကိုဤနေရာတွင်အလိုရှိသည်ဟုထင်မြင်ရန်ရောက်ရှိလာချိန်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကော်မရှင်မှ၎င်း၏နှစ်ပတ်လည်မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကိုဤတွင်ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည်ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။ ကြံ - လယ်ကွင်းများနှင့်ဆန်ကွင်းများကြားတွင်ဤတွင်ကျဉ်းမြောင်းသောတယ်လီဖုန်းနှင့်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများခေတ်နောက်ကျနေသောနေရာတွင်လက်ပန့်၏လီဗာကိုအလုပ်လုပ်စဉ်လေထုထဲတွင်ရေခဲရေဖြင့်ရေချိုး။ ရိတ်သိမ်းခဲ့သည်။ နှင့်အန္တရာယ်ရှိသော။ တကယ်နှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့သည် ဒီမှာ ISRCON ၏စိတ်နှလုံးကိုထူထောင်လိုသည့်īrīlaPrabhupāda? "အဘယ်ကြောင့် Los Angeles မြို့မဟုတ်လော" တချို့ကကျယ်လောင်စွာတွေးမိသည်။ “ ဒါမှမဟုတ် အနည်းဆုံး ဘုံဘေ?” ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနှင့်လက်နက်ချ၏နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုဖြစ်လာသည်။
īrīlaPrabhupāda၏ ISKCON ၏ရုံးချုပ်သည်ဤတွင်တည်ရှိသည်ဟူသောခံယူချက်ကသူ၏ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုနှင့်Gauḍīyaအဖွဲ့အစည်း၏ ၀ ိညာဉ်ရေးအမြင်အားဖြင့်သူ၏ဝိညာဉ်ရေးရာသခင်ထံအပ်နှံကြောင်းသက်သေထူသည် သဟဇာတ ဆောင်းပါး
ထို့အပြင်ŚrīlaPrabhupādaသည် ISKCON အားīrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhākura၏လှုပ်ရှားမှုကိုသစ္စာရှိရှိဖန်တီးခဲ့သောကြောင့်၎င်းလှုပ်ရှားမှု၏သရုပ်ဖော်ပုံများကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ သဟဇာတ ISKCON ၏ပိုမိုမြင့်မားပြီး၊
ယနေ့တွင်ဘင်္ဂလားရှိMayāpur၌မည်သူမဆိုဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်းနှင့် ISKCON တည်ထောင်သူ၏အောက်မေ့ဖွယ်ဘုရားကျောင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။အာကာရာပွင့်လင်း Plaza ကို ဖြတ်၍ တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤပြသမှုကို Transcendent ဟူသောအချက်ကိုမြေပြင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခြင်းအဖြစ်မှတ်ယူသင့်သည် -“ Acharya သည်အဖြူရောင်ကျွန်းကျွန်းရှိ Sridham Mayapur ရှိသူ၏ transcendental နေထိုင်ရာနေရာ၌အမြင့်ဆုံးသောသခင် Sri Sri Krishna Chaitanya နှင့်အတူထာဝရနေထိုင်သည်။ တူရကီကဒါစာသည်ထိုနေရာကိုရည်ညွှန်း။ အီရီလာပရာဘူပါဒါကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -“ အဲဒီမှာနောက်ထပ် ISKCON ရှိမယ်။ ” ပြီးတော့ ဟိုမှာသူကတူညီသောစာတစ်စောင်တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ၀ ိညာဉ်ရေးရာဆရာနှင့်တပည့်တော်သည်ထာဝရအတူတူဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် ISKCON မဖြစ်နိုင်ပါ ဒီမှာ နှင့် ISKCON ဟိုမှာ အဆက်ပြတ်နေကြသည်။ ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်းကိုယ်တိုင်က၎င်းဆက်သွယ်မှု၏သင်္ကေတနှင့်အာမခံချက်နှစ်ခုလုံးဖြစ်သည်။ bhauma ပြီးနောက် divya ISKCON ။ တည်ထောင်သူအဖြစ်အာကာရာ, īrīlaPrabhupādaသည် ISKCON ကို ဦး ဆောင်သည် ရတနာ ထိုတွင်ထာဝရထာဝရတည်၏ saṅkīrtana-yajña in gaura-līlā- သို့သော်သူသည်ဤနေရာတွင် ISKCON အားအထူးထင်ရှားသောစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ အခါအားလျော်စွာသူ၏အပေါင်းအဖော်များကိုထိုနေရာတွင်ရှိသူ၏နောက်လိုက်များအားလမ်းညွှန်၊
faithfulrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhākura၏“ မိဘဘုရားကျောင်း” ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာသူ၏တည်ကြည်သောဆာသာရဗာတပည့်သည်ဝေဒ Planetarium ၏ဗိမာန်တော်အတွက်ရရှိခြင်း၊ ISKCON ၏အဓိကနေရာဖြစ်သောဗိမ္မာန်တော်သည် Caitanya မှပေးသောမြင့်မားသော Transcendental အသိပညာအတွက်ပညာရေးအတွက် Arcana၊ ဘုရားကိုးကွယ်မှုအတွက်သာမက Parara-vidyāကဲ့သို့သောပုံစံဖြစ်သောisrī Caitanya Maṭhaကဲ့သို့ပုံစံပြုထားသည်။
Śrī Caitanya Maṭhaသည်ဤအမြင့်ဆုံးအသိပညာကိုဖွင့်ပြခြင်း၏သမိုင်းအားဖြင့်၎င်း၊ The Vedic Planetarium ၏ဘုရားကျောင်းသည်ပါရီဗီဒီယာကိုတူညီစွာဖော်ပြသည်။ anotherrīmad-Bhāgavatamတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဘုရားသခင့်ပထဝီဝင်နှင့်စကြဝologyာ၏သရုပ်ဖော်ပုံများအားဖြင့်ယာယီထက်ပိုပြီး Spatial ပိုများသည်။
အထူးသဖြင့်īrī Caitanya Maṭhaသည် Lord Kaita ၏နှစ်ပေါင်း ၅၀၀၀ သမိုင်းကြောင်းအတွင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သော Lord Caitanya ၏သမိုင်းဝင်လုပ်ရပ်များကိုကြေငြာရန်နှင့်ဂုဏ်ပြုရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ မာယာပူသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀ ကမိမိကိုယ်ကိုစုပ်ယူရန်နှင့်စက္ကရီတန်ကိုသင်ကြားရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယုဂ် - ဓမ္မဖြစ်သည်။
Lord Caitanya ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုအသက်အရွယ်အသီးသီးမှဆင်းသက်လာသည့် yuga-dharma ကိုထုတ်ဖော်ပြသသည့် yuga-avatārasလေးပါးအကြောင်းဘုရင်အားနီမီအားအကြောင်းကြားသည့်ပညာရှိKarabhājana၏စာမျက်နှာများတွင်īrīmad-Bhāgavatam၏စာမျက်နှာများတွင်ကြိုဟောထားသည်။ "Kali-yuga မှာလည်း" ဟုအဆိုပါပညာရှိကပြောသည်
လူတို့သည်ဖော်ပြထားသောကျမ်းချက်များ၏စည်းမျဉ်းအမျိုးမျိုးကိုလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏မြင့်မြတ်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုကိုးကွယ်ကြသည်။ အခုငါ့ဆီကကြင်နာစွာနားထောင်ပါ Kali ခေတ်တွင်အသိဉာဏ်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များသည်Kṛṣṇa၏အမည်များကိုမပြတ်သီဆိုသော Godhead ၏လူ့ဇာတိကိုကိုးကွယ်ရန်အတွက်အသင်းတော်များရွတ်ဆိုကြသည်။ သူ၏အသားအရေသည်အမည်းရောင်မဟုတ်သော်လည်းသူသည်ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ သူနှင့်အတူသူ့အဖော်များ၊ ကျွန်များ၊ လက်နက်များနှင့်လျှို့ဝှက်အဖော်များလိုက်ပါလာသည်။
ဤနေရာတွင်လက်နက်များအတွက် Sanskrit စကားလုံးသည် "ပစ်ထားသောအရာ" ဟုအဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ Lord Caitanya ၏အနုပညာသည် Hare KṛṣṇaMahā-mantra ဖြစ်ပြီးအလွန်ကြီးမားသောစွမ်းအားရှိသောသိမ်မွေ့နက်နဲသော Sonic လက်နက်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လွှင့်သောအခါဘုရားတရားမဲ့သူသို့မဟုတ်နတ်ဆိုး၏ဘဝကိုနှမြောသော်လည်းထိုလူ၏ဘုရားတရားသို့မဟုတ်နတ်ဆိုးတို့၏စိတ်ဓာတ်ကိုဖျက်သိမ်းရန်လုပ်ဆောင်သည်။ Kali-yuga သည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည်၊ ဘုရားမဲ့သတ်ဖြတ်သူများအားလုံးကျန်ခဲ့လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့် Lord Caitanya ရဲ့saṅkīrtanaသည်ငါတို့ခေတ်အတွက်သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် yuga-dharma ဖြစ်သည်။
Lord Caitanya ၏မွေးရပ်မြေတွင်စိုက်ထူသောīrī Caitanya Maṭhaသည်ဤရွှေရောင်ဖြစ်ပေါ်လာသောavatāraပေါ်ပေါက်လာရန်သမိုင်းဝင်ပြင်ဆင်မှုကိုပြသရန်ရည်ရွယ်သည်။
ရိုးရာဘင်္ဂါလီ parabolic အမိုးခုံးအောက်တွင်ယာယီခိုလှုံရာဘုရားကျောင်းသည်အဓိကနတ်ဘုရားသုံးပါးဖြစ်သည်။ ရတီကတ်၏ရတီများ၊ ŚrīīrīGāndharvikā-Giridhārī, namedrīGaurāṅgaအမည်ရှိသောသခင်ဘုရား၏နံဘေးတွင်တည်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင် Lord Caitanya အား“ ရွှေရောင်ခြေလက်” ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောနာမည်ဖြင့်ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်Rādhā-Kṛṣṇaနှင့်သူ၏နီးကပ်မှုက Lord Gaurāṅgaသည်ကိုယ်တိုင်နှင့်Rādhāနှင့်Kṛṣṇaတို့၏ပေါင်းစပ်ထားသောပုံစံဖြစ်သည်။ ownrīmatīRādhārāṇī၏ကိုယ်ခန္ဓာအရောင်တောက်ပမှု၊ မိမိ၏အထွsup်အမြတ်ဆုံး၊ ထာဝရကိုးကွယ်ဆည်းသူမြတ်သည်သူ၏အတွင်းပိုင်း ၀ ိညာဉ်ရေးရာစွမ်းအင်၏ပြယုဂ် - မိမိ၏မြင့်မြတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာပြည့်ဝသော ecstasies ကိုသူ့ဟာသူတိုက်ရိုက်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဤနတ်ဘုရားသုံးပါးကိုဝိုင်းပတ်ထားပါက၊ အဓိကယဇ်ပလ္လင်မှ စတင်၍ မြင့်မားသောပတ် ၀ န်းကျင်အ ၀ န်းတစ်လျှောက်လက်ယာရစ်ဖြင့်ရွေ့လျားပါကဗဟိုအမိုးခုံးမှထွက်ပေါ်လာသောညီမျှသောအကွာအဝေးရှိသောကုဗနတ်လေးပါးကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ တစ်ခုချင်းစီသည်သမိုင်းဝင်Vaiṣṇavaအသိုင်းအ ၀ ိုင်း (၄) ခု၏တည်ထောင်သူ-Acāryasတစ်ခု၏ mradrti ကိုဖော်ပြသည်။ နတ်ကွန်းတစ်ခုစီ၏နံပါတ်များကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ ဘယ်ဘက်တွင်ဘင်္ဂလီ၊ ညာဘက်တွင်အင်္ဂလိပ်ရှိသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သင်္ကေတကိုအောက်ပါအတိုင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဤနတ်ကွန်းအတွင်းမှသာဓကအားဖြင့်စံထားသည့်ဆရာသို့မဟုတ်အာကာရီ၏serī Madhva ၏ပုံသဏ္seာန်ကိုမြင်တွေ့ရသည်။ နိမိတ်လက္ခဏာကကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည့်အတိုင်းāuddha-dvaita ဟုခေါ်သော puruddha-dvaita, Madhvācārya၏လက်မှတ်၏ theistic articulation ဝိပṣṇနာတရားအားထုတ်မှုကိုဖွင့်ဆိုထားသည်၊ သင်အနည်းငယ်ရှေ့သို့ရှေ့သို့တက်ပြီးလျှင်နတ်ကွန်းသို့ကြည့်မည်ဆိုပါကနယ်ပယ်တစ်ခုအတွင်းသင်မြင်နိုင်လိမ့်မည်
အပေါ်ဘယ်ဘက်အပေါ်ခြမ်းကခေါင်းလေးလုံးပါသောဗြဟ္မာ၊ ,rī Madhva ၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်း၏မူလနှင့်သမိုင်းမတိုင်မီကအစပြုသူဖြစ်သောဗြဟ္မာ - စပရာဒရာ။ ပတ် ၀ န်းကျင်ကို ဆက်လက်၍ ရူဒရာ - ဆမ်ပရာရာယာရှိrarīViṣṇu Swami၊ dhuddhādvaita (puruddhādvaita) မှအာကာရီးယားသည်ထိုနေရာတွင်တည်ရှိသည်။ ထို့နောက်အမ်ရီနမ်မာရ်ကာ၊ ကာရာရာ - ဆမ်ပရာဒရာရှိdvaitādvaita (“ monism and dualism”) အာကာရာနှင့်အတူဗြဟ္မာ၏သားလေးယောက်နှင့်အတူနယ်ပယ်တွင်လည်းကောင်း၊ နောက်ဆုံးတွင်အီရီဆမ်ပရာဒရာရှိśrīRāmānuja၊ vi qualifiediṣṭādvaitaမှārārya (“ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော Monism”) သည်နယ်ပယ်တွင်Lakṣmīdevīနှင့်အတူ။
ဤအချိုးကျပုံစံသည်ကြီးမားသောသုံးဖက်မြင်မာလာဖြစ်သည်။ တည်ထောင်သူအာကာရီးယပ်စ်လေးများ၏စတုဂံပုံသဏ္shrာန်များသည်မိန့်ခွန်းကဲ့သို့သောသခင်၏ dom ရိရီကတီတန်ယာနှင့်Śrī-Śrīရာဟား -Kaa တို့၏ဗဟိုအချက်အချာနေရာတွင်ပေါင်းဆုံလိုက်သည်။ īရီ Caitanya Mahāprabhuကိုယ်တော်တိုင်ပြဌာန်းထားသည့်, ည့်သည်အားသမိုင်းနှင့်ဒphilosophနိကဗေဒနှစ်ရပ်စလုံး၏GauḍīyaVaiṣṇava၏အသိအမှတ်ပြုမှုကို able ည့်သည်အားအံ့သြဖွယ်ကောင်း။ အမှတ်ရစေသောအထင်အမြင်ဖြင့်စွဲမှတ်စေသည်။ ။
၁၉ ရာစုနှောင်းပိုင်းနှောင်းပိုင်းတွင် Lord Caitanya ၏လှုပ်ရှားမှုကိုကမ္ဘာအနှံ့ဖြန့်ကျက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုစတင်ခဲ့သည့်whorīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhākuraအားရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခဲ့သည်Vaiṣṇavaသမိုင်း၏နားလည်မှုကိုသူ၏ဖခင်ဖြစ်သူīrila Bhaktivinoda āhākuraကရရှိခဲ့သည်။ śrīla Bhaktivinoda Ṭhākuraśrila Bhaktivinoda hishākuraသည်သူ၏စာအုပ်Daśa-mula-tattva တွင်သခင်ဘုရား Caitanya သည်တည်ထောင်သူအာကာရစ္စ (စ်) လေး၏သွန်သင်ချက်များကို“ စင်ကြယ်စေ။ စုံလင်စေတော်မူ” ပုံကိုတင်ပြခဲ့သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောāāāryas၏ Veda အပေါ်အခြေခံထားသော Absolute Truth ၏ယခင်အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာဖော်ပြချက်များသည်မပြည့်စုံခြင်းနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲလွဲနေသည်။ ရလဒ်အနေနှင့်မတူကွဲပြားသောparamparāsများ၊ စည်းမျဉ်းဆက်ခံမှု၏ preceptorial chains များကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ Godhead ၏အမြင့်မြတ်ဆုံးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး,rī Caitanya Mahāprabhuသည်သူ၏သိပ္ပံဆိုင်ရာစွမ်းရည်အားဖြင့်သူတို့၏အတွေးအခေါ်များကိုပေါင်းစပ်။ ဖြည့်စွက်ခဲ့သည်။ therīMadhvācārya၏အမြင့်မြတ်ဆုံးသခင်ယေရှု၏ Transcendental ပုံစံသဘောတရား - ထာဝရ၊ ပကတိဗဟုသုတနှင့်အကန့်အသတ်မဲ့သောချမ်းသာ SupremerīRāmānuja၏အမြင့်ဆုံးသခင်ဘုရား၏ထာဝရအပေါင်းအသင်းများ၊ ṣṇrīViṣṇuSvāmi၏စင်ကြယ်သောဝါဒ၏အယူအဆ; နှင့်īrīNimbārka၏ထာဝရတစ်ပြိုင်နက်တည်းစည်းလုံးမှုနှင့် duality ဟူသောအယူအဆ - ဤ esoteric အယူအဆအားလုံးကိုŚrī Caitanya Mahāprabhuမှသန့်စင်ပြီးစုံလင်စေခဲ့သည်။ သူသည်ကမ္ဘာကြီးကိုသူ၏အကန့်အသတ်မဲ့ကရုဏာဖြင့်ဝေဒ၏နိဂုံးချုပ်ဆုံးအတိအကျနှင့်သိပ္ပံနည်းကျသတ်မှတ်ချက်ဖြင့်သူ၏စိတ်ကူးများ၊ အချိန်တိုအတွင်း Brrah Brahma-sampradāyaသည်ဝိညာဏဝိသေသလက္ခဏာကိုမမျှော်လင့်ဘဲကြီးထွားလာခဲ့သည်။ [သခင်ဘုရား Caitanya ကအစပြုခြင်းကြောင့်] နှင့်အခြားဆမ်ပရာဒယာများ၊ ဝိညာဉ်ရေးရာများသည်လက်အောက်ငယ်သားများဖြစ်လာပြီးစုံလင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည် ၎င်း၏အဆုံးမရှိတဲ့ဥပဒေသများ။
ဤနည်းအားဖြင့်“ မိဘဘုရားကျောင်း” ၏ဗဟိုမာလာအားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးသည်အတူတကွပေါင်းစပ်။ ပေါင်းစည်းထားသည့်တစ်ခုလုံးအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သခင်ခေတန်ယာသွန်သင်သောဘုရားများ၏အမြင့်ဆုံးနိယာမကိုသင်ကြားပေးခြင်း၊ acintya- bhedābheda-tattva ။
īrīlaPrabhupādaသည်သူ၏ဝိညာဏသခင်၏စကားနှင့်လုပ်ရပ်များကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအာရုံစိုက်ပြီးကြာရှည်စွာအာရုံစိုက်ခဲ့ပြီးသခင် Caitanya ၏လှုပ်ရှားမှုအားအင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန့်ပွားစေရန်နှုတ်အားဖြင့်နှုတ်ဖြင့်ပေးခဲ့သည်။ ဘာသာစကား။ သူသည်အင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့်īrīmad-Bhāgavatam၏ပထမဆုံး Canto ကိုမှတ်ချက်ပေးခြင်း၊ အိန္ဒိယတွင်စာအုပ် ၃ အုပ်ဖြင့်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းကိုတစ် ဦး တည်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဒီစာအုပ်များကိုတပ်ဆင်ပြီးသူဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရွက်လွှင့်ခဲ့တယ်။ ဟောပြောရန်အလားအလာကောင်းများကိုမြင်။ အိန္ဒိယနှင့် Godbrothers တို့အားအကူအညီနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတောင်းခံခဲ့သော်လည်းသူသည်နားမကြားသူဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဂုရုအဖွဲ့သည် ၁၉၃၀ Harmonist ဆောင်းပါးသည်ကုစားရန်ကြိုးစားခဲ့သောအလွန်ကျိုးပဲ့နေသည့်အချိန်တွင်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဂုရု၏အဖွဲ့အစည်းသည်ပြိုကွဲသွားပြီးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေခဲ့သည်။ ururīlaPrabhupādaသည် Guru Mahārāja၏မစ်ရှင်ပြန်လည်ရှင်သန်မှုနှင့်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာသောအခါသူသည်သူ့ဟာသူဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၆၆၊ ဇူလိုင်လတွင်နယူးယောက်၌သူသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Krishna သိစိတ်အတွက်အသင်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ISKCON သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းကျယ်ပြန့်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုသို့လျင်မြန်စွာပွင့်လာသောအခါအီရီလာပရာဘူပါဒါသည်သူ၏ဝိညာဉ်ရေးရာသခင်၏ကြိုတင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုခံယူခဲ့သည်။ သူအတွက်Gauḍīyaမစ်ရှင်သည် ISKCON အတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံသို့မဟုတ်ပုံစံတစ်ခုအဖြစ်အမှုဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်inrīlaPrabhupādaအတွက် beta-test အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သောအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သောtherīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhkkura၏အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ မိမိအကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏ဗားရှင်း။ ဤနည်းအားဖြင့်ŚrīlaPrabhupādaသည်īrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīāhākura၏ခြေရာကိုလိုက်လျှောက်ခဲ့သည်။
30rīlaPrabhupādaသည် ၁၉၃၀ ခုနှစ် The Harmonist ဆောင်းပါး၌စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံများအတိုင်း ISKCON ကိုတည်ဆောက်ရန် ၀ န်ခံခဲ့သည်ကိုအသိအမှတ်ပြုရန်မအံ့သြပါ၊ ၎င်းသည်ŚrīdhāmaMāyāpurရှိဗဟိုသို့မဟုတ်“ မိဘ” ဗိမာန်သို့တင်သွင်းခြင်းနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်မှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူ-cārya ငါတို့မြင်သည်နှင့်အညီ၊ ထူးခြားသောဗိမာန်သည်Māyāpura- candrodaya-Lord Caitanya-သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့်လျှို့ဝှက်ဆုံးမtempleဝါဒကိုကိုယ်စားပြုသည်၊ acintya-bhedābheda-tattva
īrīlaPrabhupādaintrī Caitanya Maṭhaသည် acintya-bhedābheda-tattva ၏အခွင့်အာဏာကိုတင်ပြပုံကိုအတုခိုး။ မပွားရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ မဟုတ်ဘဲသူသည်ထို Exposition အပေါ်တိုးချဲ့နှင့်ချဲ့ထွင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူ၏ကမ္ဘာချီလှုပ်ရှားမှုသည်ŚrīlaSarasvatīāhākura၏ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်တိုးပွားခြင်းကဲ့သို့ပင်သင့်လျော်စွာ၎င်း၏ဌာနချုပ်ဗိမာန်တော်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Vedic Planetarium ၏ဗိမာန်တော်၏အဓိကယဇ်ပလ္လင်သုံးခုပေါ်တွင်နတ်ဘုရားများသည်,rī Caitanya Maṭhaရှိနတ်ဘုရားများ၏ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်အသေးစိတ်ရေးသားခြင်းများဖြစ်သည်။ Crī Caitanya Maṭhaသည်ရက္ကဟ်၊ ဝေဒနှင့်ဗုဒ္ဓ ၀ ါဒ၊ ရာဟ်နှင့်ကṛṣṇယာတို့၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်အတူအာရိ - ဆာခီ - ဂေါပကŚrīmatīRādhārāṇī၏ရင်းနှီးသောအပေါင်းအသင်းရှစ်ခုနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ Śrī Caitanya Ma Lordha သည်Gaurāṅgaကိုကိုးကွယ်သည်၊ ဝေဒန္တနိူင်ငံ၏ဗိမာန်တော်၊ ပန်ကာတာတဗာတစ်ခုလုံး။ Śrī Caitanya Maṭhaသည်သမိုင်းတည်ထောင်သူလေး-Acāryasကိုလေးမြတ်သည်။ ဝေဒ Planetarium ၏ဘုရားကျောင်းရှိယဇ်ပလ္လင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗြဟ္မာ - ဆမ်ပရာဒယာကြီးမြတ်သောအာကာရီယန်မျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကိုသန့်ရှင်းစေ၏။
Vedic Planetarium ၏ဗိမာန်တော်သည် acintya-bhedābheda-tattva ကိုအဆုံးအမသမိုင်းမှတဆင့်မဟုတ်ဘဲVedānta၏အဆုံးစွန်နိယာမအဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည် ၎င်းသည်Kṛṣṇaနှင့်Kṛṣṇa၏စွမ်းအင်များကိုအတိုချုပ်ဖြစ်သည်။ Srimla Bhagavatam ၏ပဉ္စမခန်း canto ၏စာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဤအမိုးခုံး၏ထိပ်ရှိအဓိကဗိမာန်တော်အခန်းကိုကျော်။ ဆိုင်းငံ့ထားသည်။ သူသည်Pātāla-loka နှင့် bila-svarga မရဏာနိုင်ငံနှင့်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ထိပ်၌ Goloka Vṛndāvanaနှင့်အဆုံးသတ်ပြီးသူသည်နံပါတ် ၁၅ အချက်များကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ modelrīlaPrabhupādaမှထပ်မံဖော်ပြထားသော“ ဤပုံစံသည်အမိုးခုံးတည်ဆောက်ပုံကိုရပ်ဆိုင်းပြီးဂြိုလ်များ၏အစစ်အမှန်ရွေ့လျားမှုအတိုင်းလည်ပတ်စေလိမ့်မည်” ဟုထပ်မံဖော်ပြခဲ့သည်။
အရှည်ပေ ၁၄၀ ခန့်နှင့်အချင်း ၆၅ ပေရှိသောမော်ဒယ်သည်အဓိကဗိမာန်တော်အခန်းကြမ်းပြင်မှမြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး visitors ည့်သည်များအနေဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အဆင့်သုံးဆင့်ရှိအသေးစိတ်မြင်ကွင်းများကိုစက်လှေကားများဖြင့်ကြည့်ရှုရလိမ့်မည် အမိုးခုံး၏အတွင်းပိုင်း။ ဤပြခန်းများသည်အသေးစိတ်နှင့်ရှင်းလင်းချက်များကိုလည်းဖော်ပြလိမ့်မည်။ စကြာ ၀ mာတစ်ခုလုံးကိုဗိမ္မာန်တော်၏အနောက်ဘက်ရှိပြတိုက်တောင်ပံများတွင် ထပ်မံ၍ ရှာဖွေလေ့လာသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
B ၀ ံဂေလိတရားသည်ဘုရားသခင်၏ကိုယ်ခန်ဓာဖြစ်သည်
VrīlaPrabhupādaညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း Vedic Planetarium ၏ဘုရားကျောင်းရှိcosာဗေဒ၏ရင်းမြစ်မှာအဓိကအားဖြင့်īrīmad-Bhāgavatam၏ပဉ္စမကန္တနတွင်ပြသမှုဖြစ်သည်။
ဤမေးခွန်းကိုMahārājaParīkṣitမှ (5.16.3) ဖြင့်စတင်သည်။
ဘုရားသခင့်အမြင့်မြတ်ဆုံးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုစိတ်ထဲစွဲမှတ်ထားသည့်အခါရုပ်ဝတ္ထုပုံစံများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်သူ၏အပြင်ပန်းသွင်ပြင်တွင်စင်ကြယ်သောကောင်းမြတ်ခြင်း၏ပလက်ဖောင်းကိုယူဆောင်လာသည်။ ကြောင်း transcendental အနေအထားတွင်, မိမိသိမ်မွေ့ပုံစံအတွက် Self- တွန်းအားပေးခြင်းနှင့်သဘာဝတရား၏ပုံစံများကျော်လွန်ပြီးသူသည် Godhead ၏မြင့်မြတ်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, Vasudeva နားလည်နိုင်ပါတယ်။ အိုဘုရားရှင်၊ စကြဝuniverseာတစ်ခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံသောထိုပုံစံသည်မည်သို့ရိပ်မိကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြပါ။
Bhāgavatam၏စာဖတ်သူများ (သို့) ကြားနာသူများသည်ဤပဉ္စမကတိုတိုအစီအစဉ်ကိုအစောပိုင်းကတည်းကပြင်ဆင်ထားပြီဖြစ်သည်။ ဒုတိယနှင့်တတိယမြောက်ကန်တိုတွင်သခင်ဘုရား၏စကြဝuniversalာပုံစံဖြစ်သောvirā-rūpa (ပထမ၊ ဆsix္ဌမနှင့်ဒသမအခန်းကြီးများနှင့်တတိယမြောက်၏ဆthe္ဌမနှင့်ဆtwenty္ဌမ) ၏ဖော်ပြချက်ငါးခုကိုတွေ့ရသည်။ Canto Two အခန်း (၁) တွင်ကန ဦး တင်ဆက်မှုကို“ ဘုရားသခင်သိမြင်ခြင်း၏ပထမခြေလှမ်း” သိသာထင်ရှားစွာဖော်ပြထားသည်။
ယခုပဉ္စမကတ္တပုဏ္ဏား၌Bhāgavatamသည်virāṭ-rpa ၏ဤအကြောင်းအရာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည်၊ ၎င်းသည်စာဖတ်သူကို“ စိတ်ကိုစင်ကြယ်သောကောင်းမြတ်ခြင်း၏ပလက်ဖောင်းဆီသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ဤလောကကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ စိတ်ကိုညစ်ညူးစေပြီးယုတ်ညံ့စေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဓလေ့ထုံးတမ်းကိုကြည့်ရှုခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းအား၎င်းနှင့်ပါ ၀ င်သောအရာများကိုခံစားရန်၊ ထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အသုံးချရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုတိတိကျကျသို့မဟုတ်လုံးလုံးလြားလြားခွဲခြားထားခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်သူနှင့်ထိန်းချုပ်သူထံမှကမ္ဘာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကင်းမဲ့စေပါတယ်။ အကျိုးဆက်အားကမ္ဘာကိုပျံ့နှံ့စေ။ သန့်ရှင်းစေသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ken ထက်ကျော်လွန်နေပါသည်။
တပ်မက်မှုအားဖြင့်ယိုယွင်းပျက်စီးစေသောကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကူးစက်ခံထားရသောသတိသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏လွန်ကဲသောပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီဘာမျှမပြောရန်အမှန်တကယ်ပင်ဤလောကကိုပင်မရနိုင်ပါ။ “ သစ်ပင်”၊ “ မိုးတိမ်”၊ “ တောင်”၊ “ မြစ်”၊ “ ငှက်” စသည်နှင့်တူသောအရာဝတ္ထုများကိုကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုကြပြီးBhāgavatamမှကျွန်ုပ်တို့ကိုညွှန်ကြားသည် (ဒုတိယကန္တ၏ပထမအခန်းတွင်) သစ်ပင်များကိုဘုရားသခင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ဆံပင်အဖြစ်မြင်စေရန်၊ မြစ်များကိုသူ၏သွေးပြန်ကြောများ၊ တောင်များကသူ၏အရိုးများ၊ ငှက်များသည်သူ၏အနုပညာအရသာကိုပြသသည်။
ဤသဘာဝဖြစ်ရပ်များကိုသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုယူမှတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။ ဝိညာဏ်ကိုရှင်းလင်းလာသည်နှင့်အမျှကမ္ဘာပေါ်ရှိဘုရားများ၏တည်ရှိမှုသည်ထင်ရှားလာသည်။ ၀ ိညာဉ်ရေးရာအဖြစ်ဖော်ပြသောဤအမြင်ကို pantheism ဟုခေါ်သည်။ īrīmad-Bhāgavatam၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်ဘုရားတို့၏အမှန်တရား၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
ဤအချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Caitanya ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၏စိတ်နှလုံးတွင်virāṭ-rūpaကိုထင်ရှားစွာပြသခြင်း၏အကြောင်းရင်းများကိုတွေ့မြင်ရသည်။ ဘုရားသခင်အားသဘောပေါက်ခြင်း၌“ ပထမခြေလှမ်း” ကိုလာသူအားလုံးအားပေးသည်။
အခြားရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုမှာ Lord Caitanya ၏Vedānticပေါင်းစပ်မှု၊ acintya-bhedābheda-tattva ၏ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှင်းလင်းပြတ်သားသောတင်ပြမှုကိုပြသရန်ဖြစ်သည်။ ဤနိယာမ (tattva) သည်သခင်ဘုရားနှင့်သူ၏အမျိုးမျိုးသောစွမ်းအင်များအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်Kṛṣṇaကဲ့သို့တူညီသောအရာကိုသင်မယူမှတ်နိုင်ကြောင်း၊ ၎င်းကိုသူနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုသင်မယူမှတ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည်။
īrīlaPrabhupādaသည်နိဂုံးချုပ်အားအတိအကျဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး Bhagavad-gītā၏နောက်ဆုံးအခန်းငယ်သို့ပြောကြားခဲ့သည် -“ အမြင့်ဆုံးသည်အဘယ်အရာနှင့်မှကွဲပြားခြားနားသော်လည်းအမြင့်ဆုံးသည်အရာခပ်သိမ်းနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ ” Caitanya-caritāmṛtaĀdi ၁.၅၁ ကိုရည်ညွှန်း။ သူသည်အခြား aphoristic ဖော်မြူလာကိုပေးသည် -“ တစ်နည်းအားဖြင့်ŚrīKṛṣṇa မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာမျှမရှိသော်လည်းŚrīKṛṣṇa မှလွဲ၍ သူ၏ပင်ကိုစရိုက်လက္ခဏာ မှလွဲ၍ အခြားတစ်ခုမျှမရှိပါ။ ”
Therīmad-Bhāgavatam 5.16.3 နှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးရာ၌TherīlaPrabhupādaက“ စကြဝuniversalာပုံစံသည်အမှန်ပင်ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်သည်” ဟုဆိုသည်။
သူသည်ဤအယူအဆကို The Path of Perfection စာအုပ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ပိုမိုမြင့်မားသောအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလျှင်ကိစ္စမရှိပါ။ အရာအားလုံးဝိညာဉ်ရေးရာ ကိဟာ ၀ ိညာဉ်ရေးရာဖြစ်ပြီးအရာဟာကာṛṣṇနရဲ့စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်လို့ကိစ္စက ၀ ိညာဉ်ရေးရာပါ။ K totallya ဟာလုံးဝ ၀ ိညာဉ်ရေးရာပါ။ သို့သော်သက်ရှိသတ္တဝါများသည်ဤစွမ်းအင်ကို - အလွဲသုံးစားပြုခြင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကာṛṣṇာရည်ရွယ်ချက်များမှ လွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုအတွက်အသုံးပြုခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အကောင်အထည်ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အရေးပါသည်။ ဒီKṛṣṇaဝိညာဏ်လှုပ်ရှားမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဒီစွမ်းအင်ကို respiritualize ရန်ဖြစ်ပါသည်။ လူမှုရေးအရရော၊ နိုင်ငံရေးအရပါတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုအသက်ပြန်ရှင်လာအောင်လုပ်ပေးရမယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စံပြပါပဲ။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်ဤအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကုသမှုကိုစတင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝသည်ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်လာသည်။
Bhagavad-gītā 4.24 ကိုရည်ညွှန်း။ “ Respiritualization” ကိုလည်းဖော်ပြထားသည်။
ရုပ်လောက၏လှုပ်ရှားမှုများကို K consciousnessa အသိစိတ်ဓာတ်၌သာလုပ်ဆောင်သည်၊ Viṣṇuအတွက်သာလျင်လေထုကိုအပြည့်အဝစုပ်ယူခြင်းအားဖြင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာပိုဆန်လာသည်။ ဝိညာဉ်ရေးအားဖြည့်မှု ရှိရှိသမျှအရာအားလုံးသည်ထိုဗြဟ္မာ-ဂျိုတီတွင်တည်ရှိသည်၊ သို့သော် jyoti သည်ထင်ယောင်ထင်မှား (māyā) သို့မဟုတ်အာရုံခံစားမှုဖြင့်ဖုံးလွှမ်းသောအခါ၎င်းကိုပစ္စည်းဟုခေါ်သည်။ ဤပစ္စည်းကုလားကာကို K consciousnessa အသိစိတ်ဖြင့်ချက်ချင်းဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကာသဝိညာဏ်၏အကျိုးအတွက်ဤပူဇော်ခြင်းသို့အလှူ၏စားသုံးသူ၊ စားသုံးမှုဖြစ်စဉ်၊ ပါဝင်သူနှင့်ရလဒ်သည်ဗြဟ္မာသို့မဟုတ်အကြွင်းမဲ့အမှန်တရားတို့ဖြစ်သည်။ māyāဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသောအကြွင်းမဲ့အမှန်တရားကိုအရာဟုခေါ်သည်။ အကြွင်းမဲ့အမှန်တရား၏အကြောင်းရင်းအတွက်အကြောင်းအရာများသည်၎င်း၏ဝိညာဉ်ရေးအရည်အသွေးကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်။ Kṛṣṇaဝိညာဏ်သည်အယောင်ဆောင်သောအသိစိတ်ကိုဗြဟ္မာ (သို့) အမြင့်မြတ်ဆုံးသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။
Kṛṣṇaဝိညာဏ်တွင်အဆင့်မြင့်သူများသည်worldrīmad-Bhāgavatamတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့īrīmad-Bhāgavatamတွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့edrīmad-Bhāgavatamနှင့် Vedic Planetarium တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစကြဝologyာအားဖြင့် K worlda နှင့်ဆက်သွယ်မှု၌ဤကမ္ဘာကိုသိမြင်နိုင်သည်။ သူတို့ရဲ့တိုက်ရိုက်အတွေ့အကြုံ၏စံချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုအတည်ပြုရန် Lord Caitanya အားနည်းလမ်းများလည်းပေးထားပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်အာလာပရာဘူပါဒါသည် K consciousnessa ဝိညာဏ်ကို“ သိပ္ပံ” ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ K consciousnessa ဝိညာဏ်၏သိပ္ပံသည်မကြာသေးမီကတီထွင်ခဲ့သောရုပ်ဝတ္ထုသိပ္ပံနှင့်လုံးဝမတူပါ၊ Vedic Planetarium ၏ဗိမာန်၌စံပြုထားသောစကြာဝourာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကန့်အသတ်ပစ္စည်းအာရုံခံစားမှုများက ဦး ခေါင်းမပါဘဲအလုပ်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ တိုးသည်ဖြစ်စေ၊ တူရိယာများဖြင့်ဖြစ်စေတိုးချဲ့သည်။ ခေတ်မီနည်းပညာ၏ Vedic Planetarium ၏ဘုရားကျောင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လူလုပ်နည်းလမ်းများ၏ကန့်သတ်ချက်များ၊ ချွတ်ယွင်းချက်များနှင့်အမှားများအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်အာကာသခရီးသည်īrīmad-Bhāgavatam၏စာမျက်နှာများတွင်ပုံမှန်ဖော်ပြထားသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုအကောင့်များအချင်းချင်းခရီးသွားခြင်း၊ အထူးသဖြင့်မာဂုပညာရှိNārada Muni ၏ကြယ်ပွင့်ခရီးစဉ်များ၊ အလွန်ကြီးကျယ်သောယောဂနှင့်ဝေဒပညာရှင်များဖြစ်သည်။ īrīlaPrabhupādaကသူ့ကို“ ထာဝရအာကာသစခန်း” ဟုခေါ်ခဲ့သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်Bhāgavatamသည်ကြီးမားသောနှင့်အငယ်ဆုံးဖြစ်သော yoga-siddhis - teleportation, miniaturization, remote viewing နှင့်စသည်တို့ကဲ့သို့သောသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်စွမ်းအားများအကြောင်းကိုစနစ်တကျဖော်ပြသည်။ Bhāgavatamတွင်အံ့ဖွယ်အမှုများသို့မဟုတ်မှော်အတတ်မဟုတ်သောအရာများဖြစ်သည်။ jñānaနှင့်vijñānaကဲ့သို့ဗဟုသုတနှင့်သိပ္ပံပညာ။ သို့သော်သိပ္ပံပညာရှင်နှင့်သိပ္ပံ ၀ တ္ထုစာရေးဆရာအာသာစီကလာကမှတ်ချက်ချသည်မှာ“ လုံလောက်သောအဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုမှော်နှင့် ခွဲခြား၍ မရပါ”
Lord Caitanya သည်ခေတ်သစ်ကမ္ဘာသို့အဆင့်မြင့်မြင့်မားပြီးခေတ်မီဆန်းပြားသောနည်းပညာကိုအစောပိုင်းကာလများမှစတင်ခဲ့ပြီးဤ kali-yuga တွင်အဆင့်မြင့်နိဂုံးချုပ်များနှင့်လက်တွေ့ကျသောအသုံးချမှုများကိုရရှိစေခဲ့သည်။ Vedic Planetarium ၏ဘုရားကျောင်းသည်များစွာသောသူတို့ကိုတွေ့ရပြီးရှေးဝေဒicာဗေဒနှင့်နက္ခတ္တဗေဒ၏areaရိယာသည်ကြီးမားပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလေ့လာမှုနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသုတေသနကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုရန်ဗိသုကာနှင့် တွဲဖက်၍ ဝေဒဆိုင်ရာနက္ခတ်ဗေဒင်နှင့်နက္ခတ္တဗေဒလေ့လာရေးဌာနရှိလိမ့်မည်။ ဤအရာသည်īrīlaPrabhupāda၏ Maiypur အားVaiṣṇavism၏ပညာသင်ကြားရေးအတွက်ဗဟိုဖြစ်ရန်ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစီမံကိန်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ၁၉၇၆ တွင်သူသည် `ISKCON Bhāgavata College y အားမာရာပူတွင်ရှိခဲ့သည်။ သူသည်၎င်းကိုထူထောင်ထားသည့်“ လောက” တက္ကသိုလ်နှင့်ဆက်နွယ်သောဘွဲ့လွန်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်စေလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တက္ကသိုလ်တွင်ကိုယ်ပိုင်GauḍīyaVaiṣṇavaစာပေနှင့်သမိုင်းဝင်Vaiṣṇavasampradāyasတို့၏စာပေများကိုအဓိကထားသည့်ကျယ်ပြန့်သောသုတေသနစာကြည့်တိုက်တစ်ခုထားရှိမည်။
ဝေဒဗေဒနှင့်နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနသည်ခေတ်သစ်ပညာသင်ဆုကိုအခွင့်ကောင်းယူလိမ့်မည်။ သို့သော်အသိအမှတ်ပြု Vai Vava အခြေခံအသိပညာဗဟုသုတများနှင့်အညီအလုပ်လုပ်သောသုတေသီများအားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလေးမျိုးပါ ၀ င်သောအသားများစားခြင်း၊ မူးယစ်ခြင်း၊ တရားမဝင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်သည်။ လောင်းကစား။ ပြည်သူ့အနေဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကို“ ကျင့် ၀ တ်ဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ” ဟုဆုိုသည်။ ဗိုင်ယာဗာအစဉ်အလာများကသူတို့ကိုသိမြင်မှုဆိုင်ရာအခြေခံမူများကိုလည်းမှတ်ယူသည်။
ဤအခြေခံမူများသည် sattva-guna ၏ယဉ်ကျေးမှု၊ ကောင်းမြတ်မှုနှင့် Bhagavad-gītā (14.17) ၏ယဉ်ကျေးမှုကိုဖြစ်နိုင်သည်။ sattvātsañjāyatejñānaṁ, "ကောင်းသောပုံစံမှအမှန်တကယ်ဗဟုသုတတိုးတက်လာသည်။ " ထို့ကြောင့်ကောင်းမှုပုံစံသည်လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုလမ်းညွှန်ရန်နှင့်ညွှန်ကြားရန်ပုဏ္ဏားသို့မဟုတ်ပညာတတ်လူတန်းစား၏အခြေခံဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ခေတ်သစ်ပညာတတ်များသည်ထိုကဲ့သို့သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအသိပညာများကိုအသိအမှတ်မပြုပါ။ ŚrīlaPrabhupādaမှတ်ထားသည့်အတိုင်း Bhagavad-gītā 14.7 ကိုရည်ညွှန်းရာတွင်“ ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုကိုကိလေသာ၏ပုံစံအဆင့်အတန်းတွင်အဆင့်မြင့်တင်ထားသည်။ ယခင်ကအဆင့်မြင့်အခြေအနေသည်ကောင်းမြတ်သောအခြေအနေတွင်ရှိသည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ ” ခေတ်မီစံချိန်စံညွှန်းများဖြင့်တိုးတက်လာသောထိုသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ပညာတတ်များအတွက်ကျော်ကြားမှု (သို့) ဘုရားသခင့်ဘုံသည်အသိဥာဏ်မရှိ၊ ယုံကြည်ချက်အရှိဆုံးကိစ္စဖြစ်သည်။ သူတို့မှာအဲဒါကိုသိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းမရှိသလိုစိတ်ဝင်စားမှုလည်းနည်းနည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။
Bhāgavatam cosmology သည် sattva၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၊ ခံစားမှုနှင့်ဆန္ဒရှိမှုရှိမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဗဟုသုတနှင့်အတွေ့အကြုံတို့၏ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ sattva ၏အခြေအနေသည်နောက်ထပ်သန့်စင်ခြင်းနှင့်ပိုမိုပြင်းထန်လာခြင်းကိုခံရသောအခါ၎င်းကိုviśuddha-sattva - စင်ကြယ်သောကောင်းမြတ်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ ထိုအခြေအနေတွင်pareśānubhavaḥ၊ အမြင့်မြတ်ဆုံးသခင်ဘုရား၏တိုက်ရိုက်အမြင်ကိုရရှိရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အခြားအရာအားလုံးကိုလူသိများလာသည် -“ အကြောင်းတရားများအားလုံး၏အကြောင်းရင်းကိုသိရှိလာသောအခါသိသမျှအရာအားလုံးသိလာပြီးဘာမျှမသိရှိရသေးပါ။ Vedas (MuṇḍakaUpaniṣad 1.1.3) ပြောတာက kasminn u bhagavo vijñāte sarvam idaṁvijñātaṁbhavatīti” (Bhagavad-gita 7.2, purport) ။
ထိုသို့သောစကြ ၀ knownာသည်လူသိများလာပြီးနားလည်လာသည့်အသိပညာလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ သေချာစေရန်မှာခေတ်သစ်နည်းပညာမှတစ်ဆင့်နားလည်သဘောပေါက်ထားသည့်အတိုင်းစကြဝbetweenာအကြားနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှုအချို့သည်Bhāgavatamတွင်ဖော်ပြထားသည်။ the theāvāsyamidaṁ sarvam သည်byśāvāsyamidaṁ sarvam theopani disclad ၏ပထမဆုံးအခန်းငယ်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့theśāvāsyamidaṁ sarvam သည်mśāvāsyamနှင့်သက်ဆိုင်သောဖန်ဆင်းခြင်းကိုlatterśāvāsyamနှင့်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ထိုအခါmာ, ထိုလမ်းအတွက်ရိပ်မိအဖြစ်, သူ့ဟာသူpūrṇa, ပြည့်ဝစုံလင်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်။ “ ပြည့်စုံမှုမရှိခြင်းပုံစံအားလုံးသည်ပြည့်စုံစုံလင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများစွာကြောင့်အတွေ့အကြုံရရှိကြသည်” ဟုအက်ရီလာပရာဘူပါဒါကမှတ်ချက်ချသည်။
ဝေဒန္တဂြိုလ်၏အမိုးခုံးအောက်ရှိရာဒီ - ကဆာအောက်တွင်ဆိုင်းငံ့ထားသောmာ၏စံနမူနာကိုသင်ကြည့်သောအခါသင်osာသိသည်ဟုသင်ထင်သလောက်မှတ်မိမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုမော်ဒယ်အတွက် ၀ ိညာဉ်ရေးရာအရာခပ်သိမ်း၏နောက်ဆုံးရူပါရုံမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ īrīmad-Bhāgavatam ၄.၂၉.၆၉ တွင်ယောဂသည်အာကာသယာဉ်မှူး Nrada Muni ကိုယ်တိုင်သည်၎င်းမျှော်လင့်ချက်ကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သူကပြောပါတယ်
"Kṛṣṇaဝိညာဏ်ဆိုသည်မှာကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သူသည်နတ်ဘုရား၏အမြင့်မြတ်ဆုံးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတိအကျရှုမြင်နိုင်သကဲ့သို့ထိုကဲ့သို့သောစိတ်အခြေအနေဖြင့် Godhead ၏မြင့်မြတ်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အဆက်မပြတ်ပေါင်းသင်းခြင်း" ဖြစ်သည်။
လူတစ် ဦး ၏စိတ်ကို Lord Kaa နှင့်အလွန်နီးကပ်စွာထားခြင်းအားဖြင့်အံ့ world ဖွယ်ရာကမ္ဘာကိုသူမြင်သည့်အတိုင်းမြင်နိုင်လိမ့်မည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် Vedic Planetarium ဘုရားကျောင်းသည် ISKCON ၏ဗဟိုတွင်ပြီးစီးသောအခါနေရာတိုင်းရှိ၎င်း၏ဆက်စပ်နေသောနေရာများအားလုံးသည်ဝိညာဉ်လောကသို့ဝင်ပေါက်များအဖြစ်ပိုမိုပြည့်စုံစွာထင်ရှားလာလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာsocietyrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīṬhākura၏followingrīlaPrabhupāda၏ပရောဂျက်၏အဓိကအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သောachievementrīlaBhaktisiddhāntaSarasvatīṬhākura၏achievementrīlaPrabhupāda၏ပရောဂျက်၏အဓိကအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
Yadubhara Prabhu, Shrisha Dasa, Sraddhadevi Dasi နှင့်အခြားသူများအားသူတို့၏ဓါတ်ပုံများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ဖရက်ဒရစ်အက်ဒဝင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှပန်းချီကားကို“ နံနက်၊ ဟတ်ဆန်ချိုင့်ဝှမ်းကို Catskill တောင်များမှအရှေ့ဘက်သို့ကြည့်”
Margaret Bourke-White မှကမ္ဘာ့အဆင့်အမြင့်ဆုံးနေထိုင်မှုစံနှုန်း